Copernicus na Aristotle no mihazakazaka ny orinasanao? | Martech Zone
Copernicus na Aristotle no mihazakazaka ny orinasanao?
Alarobia, Desambra 30, 2009 Sabotsy 28 Novambra 2015 Douglas Karr
Betsaka ny orinasa iarahako miasa… ary heveriko fa ny ankafiziko indrindra dia ireo manaiky fa tsy dia manandanja loatra toy ny mpanjifany izy ireo. Ny sasany kosa tsy manaiky akory hoe misy ny mpanjifa.
Copernicus dia fantatra ho toy ny rain'ny astronomia maoderina hatramin'ny niadiany hevitra momba ny héroentrentrisme noho ny geocentrism. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny masoandro no ivon'ny rafitry ny planeta fa tsy ny tany. Fanaratsiana olona izany ary nanohitra ny kolotsaina manam-pahaizana iray manontolo izay nifangaro tamina fivavahana izy tamin'izany. Fa marina ny azy.
Raha te hamaha ny zava-miafina eo amin'ny tontolon'ny orinasanao ianao dia azonao atao ny manontany tena amin'ny tenanao momba ny fomba fitantanana ny orinasanao. Ny tsy fahafantarana ny mpanjifanao ho ivon'ny orinasanao ary manan-danja kokoa noho ny olona rehetra ao aminy dia mitarika ho amin'ny fivadibadihan'ny mpiasa, ny anjaran'ny mpanjifa, ary mety hitarika ho amin'ny fahafatesan'ny orinasanao izany.
Results Ahoana no fanaovana an'izany? Manao ahoana ny mpanjifanay?
Usage Ratsy no ampiasain'izy ireo. Ahoana no ahafahantsika mandray an'io?
Cost Mila mandoa vola bebe kokoa isika. Inona ny sandan'ny vokatra na serivisinay amin'ny mpanjifanay?
fihazonana Fa maninona no nafoinao izahay? Moa ve izahay manao izay ilaina rehetra hitazomana anao?
mpiara-miasa Inona no nataon'izy ireo ho antsika? Inona no azontsika atao mba hiantohana ny fahombiazan'izy ireo?
mpiasa Tsy nety izy ireo. Mampahomby antsika ny mpiasanay.
Budget Makà fankatoavana. Hampamoahina ianao.
Marketing Fitarihana bebe kokoa. Fantaro ny vina azo antoka fa afaka manampy isika.
Qualification mitarika Nandeha ve ny carte de crédit-n'izy ireo? Hataontsika mahomby ve izy ireo?
Fahazoana miasa ny mpiasa Inona no lazain'ny boky torolalana? Ahoana no ahafahantsika mandrisika sy manatsara ny famokarana?
Strategy Tsy mandeha… Re-org hafa! Ny mpitarika antsika dia manolotra ny drafitra 5 taona ananan'izy ireo.
Toetoetra Naka tahaka anay izy ireo! Inona no ataontsika amin'ny manaraka?
Fifandraisana amin'ny vahoaka Makà saina. Mahazoa fitiavana.
Fiaraha-miasa ara-tsosialy Avelao hanakana ny zavatra rehetra IT! Amporisiho ny mpiasa hirotsaka!
Orinasa inona ianao? Amin'izao andron'ny media sosialy izao dia tsotra ny milaza azy. Raha ny hevitrao momba ny haino aman-jery sosialy dia mivoaka ao anaty hafatrao ho an'ny mpanjifanao dia angamba Aristotle no mitantana anao. Raha manambara ny fahombiazan'ny mpanjifanao ny hafatrao dia entin'i Copernicus ianao. Naharitra 1,800+ taona izao tontolo izao vao hahalala azy… antenaina fa tsy haharitra ny orinasanao raha ela.
ShareThis dia 50% amin'ny fampiharana lehibe
Dec 30, 2009 amin'ny 7: 29 AM
Fampitahana an-tsaina, Doug. Nanitatra ny fampitahana, Henry Ford dia nanomboka Copernicus ary lasa Aristote nandritra ny fotoana kelikely, ary noterena hiverina amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny asa Copernikana. Tsy toy ny taonjato faha-14, ireo izay manaraka ny fomba tsy ivon'ny mpanjifa mifantoka amin'ny fandraharahana dia tsy hahazo tara sy volom-bolo amin'ny zavatra inoany. Bankirompitra izy ireo na notoriana.